Rakuten TV: ny fomba hijerena atiny maimaim-poana amin'ny alàlan'ny Linux PC | Avy amin'ny Linux
Sehatra atiny avy amin'i streaming, IPTV ary OTT mitombo hatrany izy ireo amin'ny resaka isan'ny mpampiasa. Betsaka ny olona no reraky ny mahita ny atiny mitovy hatrany amin'ny fantsona DTT, izay, na dia betsaka aza, dia tsy manolotra atiny ho an'ny tsiron'ny tsirairay avy hatrany. Inona koa, toa manaiky izy ireo indraindray fa tsy hanolotra zavatra mahaliana mihitsy. Noho io antony io dia tsy miato ny fitomboan'ny sehatra toa ny Rakuten TV, Amazon Prime Video, Netflix, FlixOlé, Pluto TV, Filmin, HBO, Disney +, Applet TV Plus, sns.
Eto izahay dia hasehoko anao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao a Sehatra Espaniola, ary raha azo ampiasaina amin'ny Linux PC anao, ankoatry ny fahitana ny fomba ahafahanao manararaotra ny iray amin'ireo lahasa farany fanaony, dia ny fanomezana fantsona maimaim-poana hanitarana ny atiny azonao eo am-pelatananao ...
1 Inona no atao hoe Rakuten TV?
2 Azoko atao ve ny mijery ny Rakuten TV amin'ny Linux PC-ko?
3 Inona no atolotry ny Rakuten TV?
3.1 Fandefasana maimaimpoana na karama
3.2 Ary koa fantsom-pahitalavitra maimaim-poana
Inona no atao hoe Rakuten TV?
Rakuten TV Orinasa japoney izy io, saingy any Espana no niandohany ary any Barcelona no misy azy. Serivisy manome katalaogy lehibe misy lohateny, sarimihetsika, fanadihadiana ary fanatanjahantena an'arivony maro ho an'ireo mpampiasa nisoratra anarana (na dia misy atiny maimaimpoana aza io, araka ny hazavako).
nisy naorina tamin'ny 2007 avy amin'i Jacinto Roca sy i Josep Mitjà, miaraka amin'ny anarana tany am-boalohany Wuaki.tv, ary amin'ny 2012 dia lasa ampahany amin'ny orinasa Japoney Rakuten, ary nanova ny anarany Rakuten TV. Amin'izao fotoana izao, mifandray amin'ny FC Barcelona izy io ary nanangana ny tenany eto amin'ity firenena ity ho iray amin'ireo pejy varotra an-tserasera lehibe indrindra, mifanohitra amin'i Amazon.
Amin'izao fotoana izao, ity serivisy ity dia misy amin'ny Firenena 42, avy amin'ny Vondrona eropeana ny ankamaroany, ho fanampin'ny fandikana azy amin'ny fiteny maro. Ary safidy mahaliana amin'ny sehatra hafa toy ny Netflix, Amazon Prime Video, sns. Satria ireo sehatra ireo dia matetika tsy manome anaram-boninahitra mitovy amin'izany, ka mety hahaliana ny misafidy iray na hafa (na maromaro) hahazoana ny atiny mifanaraka amin'ny zavatra tianao.
Rakuten TV izao dia mikatona ny sehatra 5 ambony atiny miaraka amin'ireo mpanjifa maro kokoa any Espana, miaraka amin'ireo mpampiasa mihoatra ny 150 tapitrisa, izay mihoatra ny 2% amin'ny tsena fotsiny.
Raha liana amin'ny fisoratana anarana ianao dia afaka manao izany amin'ny € 6.99 / volana fotsiny, na dia misy koa aza serivisy maimaimpoana… Ary azonao atao aza ny manandrana azy mandritra ny fotoana maimaim-poana.
Azoko atao ve ny mijery ny Rakuten TV amin'ny Linux PC-ko?
Rakuten TV no sehatra ifampitana, ary afaka miasa amin'ny fitaovana maro izy io. Anisan'ireo rafitra ahafahany miasa ny:
Smart TV (WebOS / TizenOS / Android TV): LG, Sony, Philips, Samsung, Panasonic, HiSense, sns.
Google Chromecast: miasa amin'ny fitaovana manohana an'ity haitao ity.
Fitaovana finday: na Android na iOS / iPadOS.
Console lalao: Sony PS3, PS4, ary Microsoft Xbox 360 sy Iray.
PC (miorina amin'ny tranonkala)- Afaka mihazakazaka amin'ny rafitra fiasa isan-karazany izay mahafeno ny fepetra takiana.
* Na izany na tsy izany dia ilaina ny manana fifandraisana Internet miaraka amin'ny hafainganam-pandeha kely indrindra 6Mb.
Raha ny aminao fepetra takiana ny mihazakazaka amin'ny Linux PC dia:
RAM 1GB ho an'ny 32-bit na 2GB ho an'ny 64-bit
Kapila mafy 16 GB ho an'ny 32-bit na 20GB ho an'ny 64-bit.
Rafitra fiasan'ny Windows na GNU / Linux, na ny hafa mifanentana amin'ireo mpanara-maso tohanan'ny. * ATTENTION: avy amin'ny Linux sy ny rafitra hafa, azonao atao ny mizaha ny tranokala, mijery tranofiara sns, saingy tsy afaka mijery andian-tantara na sarimihetsika ianao.
iMac 2007 na ho ela
MacBook 2009 na taty aoriana
MacBook Pro 2009 na aoriana
MacBook Air 2008 na avy eo
Mac Mini 2009 na aoriana
Mac Pro 2008 na taty aoriana
Miaraka amin'ny rafitra fiasa Mac OS X Mavericks na avo kokoa
Raha ny amin'ny mpizaha tranonkala izay ahafahanao mihazakazaka ny kinova web an'ity serivisy ity, raha tsy misy ny mpanjifan'ny rafitrao dia azonao atao ny mampiasa ny kinova farany an'ny:
Raha te hampiasa ny fiasa feno an'ny Rakuten TV avy amin'ny PC PC-nao manana safidy maromaro ianao:
Mampiasà masinina virtoaly misy Windows / macOS hampiasana azy amin'ny navigateur amin'ity rafitra ity.
Mametraka emulator Android / Android TV hahafahana mametraka ny rindranasa ofisialy ho an'ny finday.
Inona no atolotry ny Rakuten TV?
Rakuten TV, araka ny efa noresahiko, dia manana katalaogy midadasika misy lohateny an'arivony, sarimihetsika, fanadihadiana ary fanatanjahantena an'arivony. Na ny atiny nasionaly na ny iraisam-pirenena.
Fandefasana maimaimpoana na karama
Ao anatin'ny atiny streaming an'ny Rakuten TV no anananao ny mety ny:
Jereo ny atin'ny sarimihetsika atolotra maimaim-poana. Tsy mila fisoratana anarana na zavatra hafa toa izany ianao, apetraho fotsiny amin'ny rindrambaiko ny rindranasan'ny mpanjifa ary fidio ny faritra Free / Free izay ahitanao lisitr'ireo sarimihetsika maimaim-poana azo jerena, miaraka amin'ny doka (AVOD), eny. Ho fanampin'izay, ity lisitra ity dia havaozina tsindraindray, amin'izay dia ho afaka hahita vaovao tsy tapaka ianao.
Na dia tsy mandoa famandrihana aza ianao dia azonao atao ihany koa ny mandray anjara fomba fivarotana horonan-tsary, afaka mividy na manofa sarimihetsika manokana tianao. Mandoa ny atiny toy izany ianao ary misoroka ny famandrihana.
Azonao atao famandrihana ary ho an'io sarany isam-bolana io hahafahanao miditra amin'ny atiny rehetra misy amin'ny sehatra tsy misy ferana. Tena mora vidy izany amin'ny farany raha mandany atiny maro ianao.
Ary koa fantsom-pahitalavitra maimaim-poana
Ho fanampin'ireo voalaza etsy ambony ireo dia misy zava-baovao ao amin'ny Rakuten TV, ary ny mety hampiasana ity sehatra ity ho fahita lavitra, miaraka amina andian-dahatsoratra fantsona mandefa 24 ora hijerena maimaimpoana, Fomba fahita amin'ny TV Pluto, ary ny hany Internet no ilaina.
Manokana anao izao Fantsona 90 maimaim-poana izay mandefa fandaharana sy sarimihetsika 24 ora isan'andro, mba hahafahanao manampy azy amin'ny tolotra fahitalavitra DTT. Ireo fantsona ireo dia manana lohahevitra maro karazana:
Mba hanaovana izany dia tonga i Rakuten TV fifanarahana miaraka amin'ny marika toa Vogue, Wired, The Hollywood Reporter, Glamour, GQ, Vanity Fair, Qwest TV, Reuters, Stingray, Euronews, ¡Hola!, Planeta Junior, ary Bloomberg.
Na dia misy atiny samihafa halefa any amin'ny firenena samihafa aza, ary ny atiny takiana (VOD) tsy azo fidiana, fa izy ireo kosa fandaharam-potoana raikitra, toy ny fantsom-pahitalavitra mahazatra. Izany hoe, ho toy ny fahitalavitra hijerena amin'ny Internet, miaraka amin'ny doka.
Amin'izao fotoana izao, ireo fantsona ireo dia ao anatin'ny dingana beta, ary afaka mankafy azy ireo fotsiny ianao Fahita lavitra LG sy Samsung. Rakuten TV dia efa miasa hijanona amin'ny faran'ny Beta ary hanitatra ny serivisy amin'ny fitaovana hafa, ankoatry ny fihoarana ireo fantsona 90 ireo ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Rakuten TV: Ahoana ny fomba hijerena atiny maimaim-poana amin'ny alàlan'ny PC PC-nao
x7ee8urce dia hoy izy:
Doka izany ary mamitaka. Tsy miasa amin'ny Linux i Rakuten
Valiny amin'ny x7ee8urce
* ATTENTION: avy amin'ny Linux sy ny rafitra hafa, azonao atao ny mizaha ny tranokala, mijery tranofiara sns, saingy tsy afaka mijery andian-tantara na sarimihetsika ianao.
Mamaly an'i jus
RAKUTEN dia afaka mijery tranofiara ianao, araka ny voalaza.
Espaniola be dia be, ary tena LINUX kely
Mamaly amin'ny iray_two
Pedorro dia hoy izy:
Firenena 42 ao amin'ny Vondrona eropeana? Amin'ny firy taona isika? Nino aho fa tamin'ny nialàn'ny Fanjakana Mitambatra, nifarana tamin'ny 2021, ny Vondrona Eropeana dia firenena 27 ...
Mamaly an'i Pedorro
Fini, solon'ny SysV init sy ny systemd dia mahatratra ny kinova vaovao 4.0